Raysalwasaarihii hore ee Israa’iil Netanyahu ayaa qorshe qarsoon ku leh Hawaii
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airport » Raysalwasaarihii hore ee Israa’iil Netanyahu ayaa qorshe qarsoon ku leh Hawaii
Airport • Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • Wararka Dowladda • Wararka Jabinta Hawaii • Israa’iil Wararka Jebinaya • Wararka Raaxada • News • Dadka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Lanai, oo sidoo kale loo yaqaan Jasiiradda Cananaaska ee Hawaii, waa meesha bilyaneerka iyo dadka caanka ahi u safraan si ay ugu raaxaystaan ​​asturnaanta iyo raaxada. Liiskan waxaa ku jira aasaasayaashii Microsoft, Elton John, madaxweynayaal, iyo qaar kaloo badan. Hadda, Raiisel wasaarihii hore ee Israa’iil ayaa lagu arkay Lanai, laakiin waxaa laga yaabaa inay sheekadu intaas ka badan tahay - shirqool?
Israa’iil ayaa muwaadiniinta u sheegaysa inaysan dibadda aadin, laakiin Ra’iisul Wasaarihii hore ee Israa’iil oo hadda ah hoggaamiyaha mucaaradka, Benjamin Netanyahu, ayaa hadda ku nasanaya Jasiiradda Lanai ee Hawaii.
Jasiiradda Lanai waxaa iska leh Larry Elisson, oo ah bilyaneer Mareykan ah oo Yuhuud ah ahna milkiilaha shirkadda Internet Tech Oracle.
Larry Elisson ayaa sidoo kale ah marqaati-dacwad-ooge Benjamin Netanyahu oo ah dacwadda musuqmaasuqa ee ka dhici doonta Israel.
“Waxaan joogaa FXilliyadeena Lanai, iyo raiisel wasaarihii hore Benjamin Netanyahu ayaa halkan joogaya, isaga iyo koox ka mid ah ilaalada Mossad, ”ayaa lagu yiri farriinta uu soo dhigay mid ka mid ah martida hoteelka maanta.
Marka RW hore uu safrayo, ma u qaadan karaa in mar walba uu jiro qorshe qarsoon? Iyada oo Raysalwasaarihii hore ee Israa’iil lagu arkay jasiiradda Lanai, ajendahaani ma wuxuu raadinayaa qaansoroobaad Hawaiian ah, ama laga yaabee inuu la kulmo markhaati dacwad oo loo malaynayo inuu u markhaati furo xeer ilaaliyaha dacwad soo socota oo ka dhan ah PM?
Isla maalintaas, dhimasho kale iyo 763 infekshanno COVID-19 oo dheeri ah ayaa laga diiwaan geliyey Gobolka Hawaii ee Mareykanka. Tirada jasiiraddu waxaa ka mid ah 469 kiis oo cusub oo ka dhacay Oahu, 123 Maui, 126 Jasiiradda Hawaii, 26 Kauai, 5 Molokai, 3 on Lanai, iyo 11 dadka deggan Hawaii ayaa laga helay gobolka dibaddiisa.
Bishii Ogosto 16 -keedii, hoggaamiyaha mucaaradka ee Israa’iil ayaa la arkay isagoo ku fadhiya gawaadhida gegida dayuuradaha ee garoonka San Francisco isagoo sugaya boorsooyinkiisa golf -ka. Sida muuqata, wuxuu ka soo socday Tel Aviv kuna sii jeeday jasiiradda Lanai ee Hawaii, sida uu ku warramay The Times of Israel.
Joogitaanka Afarta Xilli ee Lanai ma aha mid raqiis ah.
Guriga penthouse ee ku yaal Four Seasons Hotel Lanai waxaa ku baxaysa US $ 21,000 habeen kasta, taasoo ka dhigaysa hoyga ugu qaalisan Hawaii. Jasiiraddu sidoo kale waxay hoy u tahay 2 koorsooyin golf ah, oo ay ku jiraan Koorsada Golf -ka Manele. Sannadkii 1994, aasaasaha Microsoft Bill Gates wuxuu ku guursaday daloolka 17aad ee koorsada.
Raiisel wasaarihii hore ayaa ku adkeysanaya in isaga iyo qoyskiisu ay bixinayaan safarka Lanai ee Hawaii, jasiiradda loo yaqaan inay martigeliso maalqabeenno iyo maalqabeenno badan waqti ka dib.
Sida uu qoray wargayska Times of Israel, wasiirka gaadiidka ayaa fasax ku jooga Maraykanka inkasta oo dawladdu ka codsatay in loo safro dibadda.
In kasta oo uu hadda ka dillaacay rikoorkii Delta ee COVID-19, Hawaii waxay soo dhaweyneysaa 20-30,000 booqdayaal cusub maalin kasta. Booqdayaasha noocan oo kale ah waxay ka imanayaan meelaha ay tagayaan Mareykanka waxayna u baahan yihiin inay muujiyaan shahaadada tallaalka CDC ee uu Mareykanku soo saaray ama ay soo saaraan shahaadada imtixaanka PCR-ga Mareykanka.
Sidaa darteed, booqdayaashu waxay u badan yihiin dalxiisayaasha gudaha ama degganeyaasha soo noqonaya.
Ma cadda sida uu R / wasaarihii hore sidan u yeeli lahaa haddii uu u duulo Hawaii oo aan joogsi ku lahayn San Francisco, sida lagu baahiyay warbaahinta Israel.
Jasiiradda Lanai waxay ka tirsan tahay Degmada Maui in ka badan 98% waxaa si gaar ah u leh madaxa Oracle Larry Ellison.
Socotada jasiiradda ugu yar ee deggan ayaa laga yaabaa inay booqdaan Hawaii, Lanai waxay siisaa soo jiidashadeeda soo jiidasho weyn.
Ra'iisul Wasaarihii hore, waxaa laga yaabaa inay wax badan qabato - kulan lala yeesho milkiilaha jasiiradda iyo saaxiibkiis Larry Ellison. Ellison ayaa sidoo kale markhaati u ah dacwad musuqmaasuq oo muhiim ah oo soo socota oo ka dhan ah RW hore.
Kaliya 9 mayl u jirta Maui, haddana adduunyo ka fog, Lanai waxay dareemi kartaa sida 2 meelood. Midda koowaad waxaa laga helaa goobo lagu nasto oo raaxo leh halkaas oo booqdayaashu ay ku raaxeysan karaan adeegyada heer-caalami ah iyo kubbadda golf-ka heerka horyaalnimada. Midka kale ayaa laga helaa isagoo ku soo boodboodaya waddooyinka dhabar-adayga ee jasiiradda oo saaran baabuur 4-taayir leh si uu u baadho khasnadaha waddada ka baxsan. Degganaanshaha, quudhsiga, iyo asturnaanta waxaa laga heli karaa mid kasta oo ka mid ah 3 -da gobollada Lanai.
Markii COVID-19 uu ku dhuftay, Ellison wuxuu baabi'iyay kirada meheradda Lanai, iyo 2018, wuxuu aasaasay shirkadda fayoobaanta Sensei, oo kormeerta isbaarooyinka iyo aqalka dhirta lagu koriyo ee qoraxda ku shaqeeya.
Ellison wuxuu ku iibsaday ku dhawaad ​​98 boqolkiiba jasiiradda 2012 lacag lagu sheegay $ 300 milyan; iibsigiisa waxaa ka mid ahaa 87,000 (35,200 hektar) oo ka mid ah jasiiradda 90,000 hektar (36,400 hektar) oo dhul ah.
Lanai, oo hoy u ah qiyaastii 3,200 oo deggan, ayaa ah jasiiradda ugu dadka yar Hawaii, waxayna hoy u tahay xeebo deggan, dhul adag, meelo lagu nasto oo heer sare ah iyo himilooyin waara ee Ellison, oo uu ka fulinayo shirkad horumarineed oo la yiraahdo Pulama Lanai.
Jasiiradda 141-mayl-mayl (365 sq km), oo 8 mayl (13km) u jirta xeebta Maui, waxay leedahay eber nalal waddo iyo waddooyin yar yar oo laami ah. Forbes. Marka la barbardhigo jasiiradaha kale ee Hawaii, Lanai waa mid cidlo ah - laakiin Ellison wuxuu leeyahay qorshayaal uu ku beddelayo. Wuxuu doonayaa inuu Lanai u rogo goob dalxiis.
Waqtigan xaadirka ah, jasiiraddu waxay hoy u tahay 2 Four Seasons Hotels iyo tiro ka mid ah xulashooyinka hoyga nooca B&B.
Israa’iil, Netanyahu waxaa lagu maxkamadeynayaa eedeymo la xiriira khiyaano iyo jebinta kalsoonida 3 kiis oo kala duwan, iyo sidoo kale laaluush midkood. Wuu inkiraa khaladka.
Ellison waa mid ka mid ah dhowr boqol oo marqaati oo dacwad oogista ka ah dacwadda musuqmaasuqa ee Netanyahu.
Magaciisa ayaa la sheegay inuu ku soo baxay 2 ka mid ah dacwadaha iyadoo warbixin sanadkii hore la sheegay inuu ku ololeeyay kuna qanciyey maalqabeenka reer Israel Arnon Milchan inuu iska daayo qareenkiisa si Netanyahu u shaqaaleysiiyo.
Nancy Borts wuxuu leeyahay,
Ogosto 21, 2021 markay tahay 14:45
Sheekooyin aan sax ahayn, khaladaad khaldan, eedaymo aan caddayn. Ma jiro maqaalku oo leh Ellison (ma aha Elisson)
wuxuu joogay jasiiradda, wuxuu la kulmay Netanyahu ama xitaa wuxuu diyaarsaday joogitaanka shaqaalaha Ellison.
Eexda qoraa si cad baa loo arkay. Ma aha war -bixin sax ah ama sharaf leh!